အဘွားကြီးတစ်ယောက် နောက်ဆုံးစားသောက်ခဲ့တဲ့ ညစာ - Myanmarload
ဘာကိုစားခဲ့လို့ သူမရဲ့နောက်ဆုံးညစာ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလိမ့်
တစ်ခါက အဘွားကြီးတစ်ယောက် တောထဲထွက်ပြီး ညစာထမင်းချက်ဖို့ အမြစ်တူး‌ေနခဲ့ပါတယ်။ တူးနေရင်းနဲ့ သစ်ရွက်ပုံတွေထဲကနေ အရာတစ်ခုကို သူမတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ကြီးမားလှပြီး အမွှေးထူးနေတဲ့ ခြေမတစ်ခုပါ။ သူမအမြင်မှာတော့ ခြေချောင်းကြီးဟာ တကယ်အရသာရှိမယ့်အသားလို ဖြစ်နေတော့ အဘွားကြီးလည်း ခြင်တောင်းထဲကို ထည့်ပြီး အိမ်မှာညစာချက်ဖို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမဟာ ယူလာတဲ့ အမွှေးထူထူ ခြေမကြီးကို ရေနွေထဲ ထည့်ပြုတ်ကာ စွတ်ပြုတ်လုပ်သောက်ခဲ့ပြီး စားသုံးလိုက်ပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူမရဲ့ တစ်ပတ်တာ အစားအသောက်တွေထဲမှာ အရသာ အရှိဆုံး အသားတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီညမှာတော့ အဘွားကြီးဟာ ဗိုက်ပြည့်ပြီး ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ အိပ်ရာဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ညသန်းခေါင်ကျော်လောက်မှာ အဘွားကြီးအိမ်နားက သစ်ပင်ထိပ်တွေမှာ အေးစက်တဲ့လေက စတင်တိုက်ခတ်လာပါတယ်။ အနက်ရောင် တိမ်တိုက်ကြီးလည်း လကိုဖြတ်ပြီး တောအုပ်ထဲမှ လျှိုခနဲ အသံထွက်လာပါတော့တယ်။ " ငါ့ခြေချောင်း! ခြေချောင်း! ငါ့ခြေချောင်း ပြန်လိုချင်တယ်!" အိမ်အတွင်းထဲမှာတော့ အဘွားကြီးဟာ အိပ်ရာပေါ်မှာ မသက်မသာ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကာ နားရွက်များကို ဖုံးအုပ်လိုက်ပါတယ်။ လေပြင်းတိုက်ပြီး သစ်ပင်ထိပ်တွေမှာ တဟုန်ထိုး တဆတ်ဆတ်တုန်နေချိန်မှာတော့ တောအုပ်ထဲက အသံတစ်သံ ထွက်လာပါတယ်။ တောတောင်အစွန်းမှအသံက " ငါ့ခြေချောင်း! ခြေချောင်း! ငါ့ခြေချောင်း ပြန်လိုချင်တယ်!" အိမ်အတွင်းမှာတော့ ဒီတစ်ခါ အဘွားကြီးဟာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ပေမယ့် ပြန်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။
အဲ့နောက် ခြံအပြင်ဘက် ပန်းခြံလမ်းမှ တဟုန်ထိုး အော်ဟစ်သံများ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီတစ်ခါအသံကလည်း " ငါ့ခြေချောင်း! ခြေချောင်း! ငါ့ခြေချောင်းလေးတွေ ပြန်လိုချင်တယ်!" ဒေါသတကြီးနဲ့ အော်နေတဲ့အသံကို အဘွားကြီး ထပ်ကြားရချိန်မှာတော့ ကုတင်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်းကာ တံခါးဆီသို့ ပြေးသွားပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေမယ့် ဘာမှမတွေ့ရတာကြောင့် သူမ ပြန်ဝင်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် အိမ်ရှေ့တံခါး ကျိုးပွင့်သွားတဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရပြီး လှေကားထစ်ကို တက်လှမ်းလာတဲ့ ခြေသံကြီးတွေကုိ သူမကြားလိုက်ရပါတယ်။ တံခါးပေါက်မှ ချောင်းကြည့်လိုက်ခ‌ျိန်မှာတော့ သူမတံခါး၀တွင် ကြီးမားလှတဲ့ အရုပ်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ " ငါ့ခြေချောင်း! ခြေချောင်း! ငါ့ခြေချောင်း ပြန်လိုချင်တယ်!"
အဘွားကြီးလည်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာဖြင့် မတ်တတ်ထိုင်ကာ "ငါ မင်းရဲ့ ခြေချောင်းကို စားလိုက်ပြီ!" ဆိုပြီး ဒေါသတကြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ဟုတ်တယ် မင်း စားခဲ့တယ်” ဆိုပြီး တံခါး၀က အရာကြီးဟာ သူမရဲ့နား အနားက‌နေ လေညှင်းကဲ့သို ‌ဖြေးညှင်းစွာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ‌ေတာ့ အဲဒီဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ အဘွားကြီးကို နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်သူမှ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ သူမ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းရဲ့ တစ်ခုတည်းသော သဲလွန်စကိုတော့ အိမ်နီးနားချင်းတစ်ယောက်ကတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ အိမ်နားက မြက်ခင်းပြင်ရဲ့ မြေဆီလွှာထဲမှာ နစ်မြုပ်နေတဲ့ ဧရာမ ခြေရာတစ်ခုကုိ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခြေရာကတော့ ဘယ်ဘက်ခြေမ ပျောက်ဆံုးနေပါတယ်။ တကယ်တော့ အဘွားကြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ညမှာ ထိုအရာကြီးက အဘွားကြီးကို ပြန်စားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သတင်း အရင်းအမြစ်៖ KOA